Home Hindi, Warbixinada Maanta CAJIIB: Salman Khan Oo 13 Maalmood Ku Dhaafay Mid Kamid Ah Filimadii Ugu Fiicnaa Ee Uu Sameeyey Amir Khan
Filimka Salman Khan ayaa weli ku dhex mushaaxaya Box Office-ka wuxuuna filimkaan soo saaraay qiimo iyo sidoo kale lacago aan caadi ahayn muddada kooban ee uu saaran yahay Box Office-ka ,waana filim wax badan ka shaqeeyey dhanka soo jiidashada sheeko ahaan iyo sidoo kale jiliinka uu filimkaan leeyahay.
Tiger Zinda Hai ayaa laga dareemayaa inuu awood toos ah ku qabsaday Box Office-ka todobaadyadii ugu dambeeyey waxaana filimka awood ahaan sidoo kale laga dareemayaa inuu u baahan yahay wax badan in laga sameeyo dhanka Box Office-ka, waana filim xaqiiqdii u baahan loolan dhanka Box Office-ka.
Hadda waxaa uu saaran yahay tiyaatarada aduunka muddo ku siman 13 maalmood wuxuuna marayaa keliya gudaha India 286 crore, waana qiimo lacageed mar hore uu filimkaan ka sameeyey Box Office-ka.
Taas waxay ka dhigan tahay inuu meel banaan ah ku dhaafay filimka Dhoom 3 ee uu Amir Khan sameeyey sanadkii 2013 , waxaana filimkaan guud ahaan inta uu saarnaa Tiyaatarada shaqeeyey 280.25, waana qiimo aan caadi ahayn waxa uu tiyaatarada ka sameeynayo Salman Khan filimkiisa Tiger Zinda Hai.
Dhanka kale fursad fiican ayuu weli heystaa filimkaan sababtoo ah ilaa iyo hadda shirkada filimaanta qeybisa ee Yash Raj Films weli ma helin filim ka sameeyn badan midkaan ,waana sababta uu rajo fiican uu u lahaankaro fiimka Salman Khan ee Tiger Zinda Hai.
Si walba director Ali Abbas Zafar ayaa suganaya in filimkiisa Tiger Zinda Hai uu guud ahaan tiyaatarada aduunka ka shaqeeyo [301.50 crore].
Haddii ay sidaa dhacdo waxaa uu Director-kaan noqondoonaa shaqsigii ugu horeeyey ee Box Office-ka ka keensada laba filim oo wax ka badan 300 Crore Club ka shaqeeyeen Box Office.